Wasiirka Caafimaadka Ingiriiska oo uu ku dhacay Coronovirus |
Dalka Talyaaniga waxaa Talaadadi laga diiwaangeliyay tiradi ugu badneyd ee ugu dhimata cudurka coronavirus, halka magaalada New York ee dalkaan Mareykanka la geeyay ciidanka ilaalada qaranka si loo xakameeyo faafiska cudurkaan oo argagax ku abuuray dhamaan caalamnka.
Dalka ugu daran dhanka Yurub ee uu xanuunkaan haleelay oo ah Talyaaniga, Talaadadi dhimashada ayaa gaatay guud ahaan waddanka ilaa iyo 631 qof. Waxaa la joojiyay dhamaan isu imaadyadi isboortiga, dhaqanka iyo siyaasadda.
Dalka Ingiriiska, wasiirka caafimaadka, haweeneyda la yiraahdo Nadine Dorries ayaa sheegtay inuu cudurka Coronovirus ku dhacay, isla markaana ay isku karantiishay hoygeeda.Magaalada New York ee dalkaan Mareykanka ilaa iyo 173 kiis ayaa la xaqiijiyay. Guud ahaan Mareykanka ku dhawaad kun qof ayaa la soo wariyay inuu cudurka ku dhacay.
Shinaha ayaa wali ah dalka ugu daran ee uu xanuunka aafeeyay. Waxaa ilaa iyo hadda ugu dhintay dalkaasi in ka badan 3 kun oo qof halka uu soo riday dad gaaraya 80 kun oo qof.